Filezilla: mpanjifa FTP maimaimpoana tena tsara miaraka amina kinova vaovao | Avy amin'ny Linux
Filezilla: mpanjifa FTP maimaimpoana tena tsara miaraka amina kinova vaovao azo
Filezilla dia tsara «cliente FTP» maimaim-poana sy maimaim-poana miaraka a misy ny kinova vaovao ho an'ity faran'ny taona 2019 ity. laharana kinova «3.46.3» Navoaka tamin'ny 23/12/2019 mba hanampiana ny fanovana sy ny fanitsiana bibikely. Ary amin'ny alàlan'ny maimaim-poana, midika izany fa rindrambaiko io «Código Abierto» nozaraina maimaimpoana araka ny fe-potoan'ny Fahazoan-dàlana ho an'ny daholobe GNU.
Ankoatr'izay, tsy vitany ny mahatohitra ny «protocolo FTP», fa ny «FTP sobre TLS (FTPS) y SFTP». Ary koa, izy io dia tonga amina karazana variana miaraka amin'ny fanampiana fanampiny ho an'ny Protokol WebDAV, Amazon S3, Backblaze B2, Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Microsoft Azure Blob ary File Storage ary Google Cloud Storage. Ary ankoatry ny kinova mpanjifa dia mitondra kinova mpizara izy, ny «FileZilla Server», izay manome tsara «servidor FTP y FTPS» de «Código Abierto».
Ao amin'ireo kinova roa ireo, ny mpanjifa sy ny mpizara (FTP, FTPS ary SFTP), Filezilla tonga amin'ny endrika sehatra maro. Ankoatr'izay, a fampiharana haingana sy azo antoka, izay mitondra fiasa mahasoa maro miaraka amin'ny a interface tsara momba ny mpampiasa intuitive.
Ary misaotra an'i Fanohanana ofisialy sy fiaraha-monina tena tsara sy goavana nalamina tamin'ny alàlan'ny forum sy wiki, miaraka amin'ny mety hisian'ny mekanisma tracker bug sy ny fangatahana endri-javatra, ary a antontan-taratasy feno sy marina manamboatra Filezilla iray amin'ireo mpanjifa FTP maimaim-poana sy malaza indrindra.
1 Filezilla: mpanjifa FTP maimaim-poana
1.2 Inona no vaovao amin'ny andiany 3.46.X
Filezilla: mpanjifa FTP maimaim-poana
Anisan'ny mampiavaka ny FileZilla amin'ny maha fampiharana azy, azontsika atao ny mitanisa ireo voalaza etsy ambany:
Rindrambaiko Open Source io.
Izy io dia fampiharana mora ampiasaina, haingana sy azo antoka.
Ahitana ny fanohanana ny FTP, FTPS ary ny protokol SFTP.
Izy io dia tonga amin'ny endrika multiplatform: Windows, Linux, * BSD, Mac OS X, ankoatry ny hafa.
Anisan'izany ny fanohanana ny IPv6, HTTP / 1.1, SOCKS5 ary FTP-Proxy, ankoatry ny protokolola maro hafa.
Hita amin'ny fiteny maro izy io, ao anatin'izany ny anglisy sy espaniola.
Manohana ny famerenana sy famindrana ireo rakitra lehibe, hatramin'ny 4GB.
Izy io dia manana mpitantana matanjaka sy azo ampiharina amin'ny tranokala sy ny filaharana famindrana.
Manao ny sivana anaran'ny rakitra sy ny karoka fisie lavitra.
Izy io dia manana interface interface graphique intuitive, tabbed miaraka amina drag and drop support, miampy magicien fananganana tambajotra.
Izy io dia manohana ny fampitahana ny lahatahiry, ny fanovana ny rakitra lavitra, ny tsoratadidy, ny fetran'ny hafainganam-pandehan'ny famindrana ary ny fitetezana lahatahiry voatahiry.
Inona no vaovao amin'ny andiany 3.46.X
Ireto ny fanitsiana sy fanovana nitranga isaky ny andiany 3.46, manomboka amin'ny farany ka hatramin'ny voalohany:
SFTP: Ny famoahana raikitra amin'ny Windows
SFTP: Ireo zotra lavitra dia tsy voavaha tanteraka tamin'ny asa rehetra
SFTP: Namboarina ny fifandraisana miverina amin'ny alàlan'ny keyfile voaaro amin'ny teny miafina
Namboarina bibikely amin'ny haavon'ny FTP Server rehefa mandefa andalana valiny lava loatra.
Miorina amin'ny libfilezilla> = 0.19.3 (https://lib.filezilla-project.org/) ny fananganana sy ny fampandehanana FileZilla, izany dia manamboatra olana vitsivitsy miaraka amin'ny kaody famerana taha vaovao.
Ny singa SFTP dia nohavaozina ary mifototra amin'ny PuTTY 0.73 ankehitriny.
Fanamarihana: Raha mila fampahalalana bebe kokoa na antontan-taratasy momba Filezilla, na ny fampidinana ireo rakitra apetrakao amin'ny toetr'andro farany azonao vangiana ny tranokala ofisialy.
Manantena izahay fa izany ianao "lahatsoratra kely nefa mahasoa" momba ity mpanjifa FTP maimaim-poana ity nantsoina «Filezilla», izay manana kinova vaovao ankehitriny «3.46.3», dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahafinaritra sy goavambe ary mihamitombo ny fampiharana sy ny «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Filezilla: mpanjifa FTP maimaimpoana tena tsara miaraka amina kinova vaovao azo
Cesar de los RABOS dia hoy izy:
… Tsy misy toa ny fampiasana ny boaty / nautilus; ny fahitana azy no tsara indrindra sy mora entina manodinkodina ny zava-drehetra!
Valio amin'i César de los RABOS
Miarahaba anao, Cesar! Azo antoka fa tsara kokoa ny mampiasa ireo fitaovana ampiasaina amin'ny rindrambaiko izay efa tonga ao amin'ny GNU / Linux Distros anay. Ny Filezilla dia kokoa ho an'ny rehefa mila fiasa fampifandraisana ftp bebe kokoa ianao na efa zatra manao zavatra bebe kokoa noho ny mampifandray, maka tahaka na mampidina rakitra amin'ny alàlan'ny ftp fotsiny. Fa raha fintinina, Filezilla dia fitaovana rindrambaiko Maimaimpoana tsara amin'ny faritra misy azy.
OpenStage: New Arch Linux Derivative Distro
Ampidino ny mpitantana tenimiafina loharano misokatra tsara izay tokony andramo